Jersey Bra & Knickers Faransiis Qaabka PDF tolidda – Tailoress The
Home / Haweenka / lingerie / Jersey Bra & Knickers Faransiis Qaabka PDF tolidda
Tani waa qaab comfy jiido-on rajabeeto maaliyada. Si fudud abuuray kaliya labo dun dhinac iyo laba gantaal. hannaankii tolidda PDF waxaa ka mid ah tirada dumarka 4-18 kaasoo ah koobkii tirada A / B / C / D / DD. Si fudud u soo gooyay koob size loo baahan yahay iyo size band. Curi tallaabadaas knickers Faransiiska in tirada 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 /16 / 18.
SKU: JeBrPDSePa-1 Categories: lingerie, Haweenka Tags: rajabeeto, gabadh, maaliyada, lingerie, nigis, haweenka
Tani waa qaab comfy jiido-on rajabeeto maaliyada. Si fudud abuuray kaliya labo dun dhinac iyo laba gantaal. hannaankii tolidda PDF waxaa ka mid ah tirada dumarka 4-18 kaasoo ah koobkii tirada A / B / C / D / DD. Si fudud u soo gooyay koob size loo baahan yahay iyo size band.
Easy si ay u sameeyaan knickers maaliyada in tirada UK 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18. Waxaa ka mid ah laba qaab oo, mid ka mid ah hannaanka ee marada maaliyada oo joogto ah iyo mid ka mid ah hannaanka ee marada maaliyada stretch. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa shalash stretch ama dhar kale stretch qaabka la this.
Fadlan u aragto Jersey BACAAD tutorial iyo Jersey FARANSIISKA KNICKER tutorial halkan riix ama tab hoose si aad u furto in this page.
Jersey BACAAD: Copyshop size: 30cm x 42cm / pages A4: 4 / Letter US: 4
Jersey FARANSIISKA KNICKERS Copyshop size: 20cm x 79cm / pages A4: 5 / Letter US: 4
Taag Jersey FARANSIISKA KNICKERS Copyshop size: 20 cm x 69cm / pages A4: 4 / Letter US: 4
Be the first to review “Jersey Bra & Knickers Faransiis Qaabka PDF tolidda” Cancel reply